Qaraxii saakay oo Ku geeriyootay dhowaad 100 ruux - Awdinle Online
Qaraxii saakay oo Ku geeriyootay dhowaad 100 ruux
December 28, 2019 (Awdinle Online) –khasaaraha baaxada leh ayaa ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaari la sheegay inuu xamuul ahaa, kaasoo lagu soo raray waxyaabaha qarxa, laguna qarxiyay Isgoyska Ex Koontarool Afgooye.
Dhimashada ayaa waxay cagacageyneysa illaa boqol ruux, sida ay soo sheegayaan saraakiisha caafimaadka.
Agaasimaha Isbitaalka Madiine Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in 73 meydad la soo gaarsiiyay Isbitaalka, sidoo kale dhaawaca Isbitaalka la keenay ayaa gaaraya 52 ruux.
Ka sokow Isbitaalka Madiina waxaa jira isbitaalo kale oo la geeyay dhaawacyo iyo dhimasho, kuwaasoo tirada sare u sii qaadi karta, khasaaraha uu aad uga badan karo inta hada la ogyahay.
Isbitaalada Somali Sudanes, Isbitaalka Digfeer iyo kuwa kale ayaa dhaawacyo fara badan la geeyay, waxaana isbitaaladaas hareeyay dad fara badan oo dadkooda ku la’ qaraxaas.
Previous articleAxmed madoobe oo War kasoo saaray Qaraxii isgoyska EX Contoral Afgooye
Next articleBOOSAASO IYO GAALKACYO OO MAANTA GO’AN ISU’SOCODKA GAADIIDKA